Didier Deschamps oo ka difaacay Pogba dhaleeceenada kaga imaanaya Jose Mourinho – Gool FM
Didier Deschamps oo ka difaacay Pogba dhaleeceenada kaga imaanaya Jose Mourinho
Dajiye September 30, 2018
(Manchester) 30 Sab 2018. Macalinka xulka qaranka France ee Didier Deschamps ayaa difaacay xidiga khadka dhexe kooxda Manchester United ee Paul Pogba, kadib markii uu la kulmay hoos u dhac ku yimid qaab ciyaareedkiisa xili ciyaareedkan.
Paul Pogba ayaa la fahansan inuu khilaaf xoogan kala dhexeeyo macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho tan iyo bilawga xili ciyaareedkan, waxaana markaan dagaalka qeyb kasoo noqday Deschamps si uu u difaaco wiilkiisa.
“Muhiim ma ahan in Manchester United ay ku fikirto in Pogba uu kaligiis wax walba ka qaban karo kooxda”.
“Pogba wuxuu u baahan inay caawiyaan dhamaan ciyaartoyda kooxda Manchester United si ay ugu guuleystaan koobab”.
“Muhiim ma ahan in Manchester United ay guul ka sugto hal ciyaaryahan oo kaliya”.
Si kastaba Manchester United ayaa kala kulantay guuldaro xanuun badan ee 3-1 ah kooxda West Ham United kulankooda 7-aad ay ku wada ciyaareen horyaalka Premier League, taasoo muran xoogan ka dhex abuurtay kooxda.
Lopetegui oo ku dhawaaqay liiska xidigaha Real Madrid kulanka CSKA Moscow ee tartanka Champions League
Steven Gerrard oo ka warbixiyay waxa ka maqan kooxda Liverpool si ay ugu guuleysato horyaalka Premier League